Blue Ocean IT solution
ကုန်ပစ္စည်း အဝယ်စာရင်း ထည့်သွင်း၍ Cashier မှရောင်းခြင်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်း လက်ကျန်ပမာဏ အတိုးအလျော့ကို ချက်ချင်းသိနိုင်ခြင်း။
ပြန်လဲလှယ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို စာရင်းထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းလက်ကျန် နှင့် ငွေပမာဏကို တွက်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ အနည်းဆုံးလက်ကျန်ပမာဏကို ထည့်သွင်းပေးခြင်းဖြင့် လက်ကျန်နည်းနေပါက ကြိုတင်ဝယ်ယူနိုင်ရန် သတိပေးခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရာတွင် မိမိပြောင်းလဲရောင်းချလိုသောနေ့ရက်ကို ကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးထားနိုင်ခြင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကို History ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချရာတွင် FOC ပေးခြင်း Item Discount/ Voucher Discount များကို ပေးနိုင်ခြင်း စသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ...
Tablet Ordering System (စားသောက်ဆိုင်သုံး ဆော့ဝဲလ်)
Kitchen, Counter, Bar များသို့ လူကိုယ်တိုင်သွားစရာမလိုဘဲ Waiter မှ Tablet အသုံးပြု၍ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ Orderမှာကြားနိုင်ခြင်း။
Waiter မှ စားပွဲဝိုင်းအလွတ်များကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာရှာဖွေပေးနိူင်ခြင်း။
Waiter မှ Customer များမှာယူလိုသော စိတ်ကြိုက်အရသာများကို Kitchen, Bar သို့ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းမှာကြားပေးနိုင်ခြင်း။
Kitchen, Bar သို့ပေးပို့သော Order Slip များကို Kitchen,Bar ရှိ Printer မှ တစ်ရွက်ထက်ပို၍ တစ်ပြိုင်တည်း ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Cashier သို့ လူကိုယ်တိုင်သွားရန်မလိုဘဲ Waiter မှ Tablet အသုံးပြု၍ Bill ကြိုတင်တောင်းခံနိုင်ခြင်း။
Waiter မှ Tablet အသုံးပြု၍ မှာယူထားသော Order များကို စားပွဲဝိုင်းများအလိုက် ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Menu များအား မိမိ၏ ဖုန်းဖြင့် QR Code Scan ဖတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရှု မှာယူနိုင်ခြင်း။
အသုံးပြုရလွယ်ကူ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေရန်အတွက် Android System အားအသုံးပြုထားခြင်း။
Quick Waiter System ကို စားသောက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်များတွင်သာမက လုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်ဖြည့်သွင်းပြီး KTV များ ၊ Bar များတွင်လည်း အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ စသည်တို့အပြင် အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာ..........
စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းသုံး အရောင်းအဝယ်စနစ်
Cashier မှ စားပွဲဝိုင်းအလွတ်များကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ရှာဖွေပေးနိုင်ခြင်း။
Customer မှာယူသော ဟင်းပွဲများကို Waiter မှမှတ်သား၍ Cashier မှတစ်ဆင့် Kitchen / Bar သို့ Order Slip များပေးပို့နိုင်ခြင်း။
Order ပေးပို့ရာတွင် Customer စိတ်တိုင်းကျ အရသာများကို Order Slip တွင် တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးနိုင်ခြင်း။
English, Myanmar နှစ်ဘာသာဖြင့် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် Computer အခြေခံမရှိသူများပါ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Room Charges, Service Charges, Tax ပမာဏများကို တိကျမှန်ကန်စွာ ကောက်ခံပေးနိုင်ခြင်း။
အရောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများကို ဝန်ထမ်းအဆင့်အလိုက် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
အရောင်းစာရင်းများကို မိမိကြည့်ရှုလိုသော ရက်၊ လ၊ နှစ်အလိုက် စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Voucher သွင်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများကို အသေးစိတ် မှတ်သားပေးထားနိုင်ခြင်း။ စသည်တို့အပြင် အခြားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာ.......
Quick Food Court
Food Counter တစ်ခုချင်းစီအတွက် . . .
Customer များအနေဖြင့် Smart Card System ကို အသုံးပြု၍ Cashier Counter တွင် Register ပြုလုပ်ထားနိုင်ပြီး Food Counter တစ်ခုချင်းစီတွင် အဆိုပါ Smart Money Card ဖြင့် ဝယ်ယူစားသုံးခြင်း၊ ကျသင့်ငွေ ပေးချေနိုင်ခြင်း။
Smart Money Card တွင် ငွေပမာဏကို မလုံလောက်ပါကလည်း ထပ်မံ ဖြည့်သွင်းနိုင်ခြင်း၊ ကျန်ရှိနေသော ငွေပမာဏကို ငွေသားဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။
သက်ဆိုင်ရာ Menu များကို သီးခြား သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
ကောင်တာ တစ်ခုချင်းစီ၏ အရောင်းစာရင်းများကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ိခြင်း။
ကိုယ်တိုင် မှာယူစနစ်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝန်ထမ်း အင်အားလျှော့ချနိုင်ခြင်း။
Food Courtနှင့်သက်ဆိုင်​သောReportများအားပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း ။
Counter တစ်ခုချင်းစီအတွက်Touch Screen PC Computer များနှင့်Tablet များအားအသုံးပြု၍ရနိုင်ခြင်း။
စားသုံးသူများ အနေဖြင့် Card သို့မဟုတ် ​ငွေသားဖြင့်လည်း​ငွေရှင်းနိုင်ခြင်း။
Food Court Software ကို ကျောင်းများ၊ ရုံးများရှိ Food Court Canteen များတွင်လည်းအသုံးပြု၍ရနိုင်ခြင်း။
လူကြီးမင်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် စနစ်တကျဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသော စားသောက်ဆိုင်၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ Tea Shop၊ Cafe Shop၊ Food Court Shop များတွင် ယုံကြည်စွာအသုံးပြုနေသော Blue Ocean ICT Solution မှ ထုတ်လုပ်ထားသည့် Quick Mini POS Software ဖြစ်ပါသည်။
Mini POS ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် Computer ဖြင့် အသုံးပြုစရာမလိုဘဲ Tablet နှင့် Printer ရှိရုံဖြင့် လူတိုင်း အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
Tablet တစ်လုံးထဲဖြင့် Data Setup များ ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း။
Report များကိုလည်း ရောင်းအားအလိုက် တိကျမှန်ကန်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် Software အသုံးပြုမည်ဆိုလျှင်လည်း Mini POS ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း။
ဟိုတယ် လုပ်ငန်းသုံး ဆော့ဝဲလ်
အခန်းလွတ်များ၊ သန့်ရှင်းရေးမပြုလုပ်ရသေးသည့်အခန်းများ၊ လူရှိသည့်အခန်းများ စသည်တို့ကို Quick FO Floor Plan တွင် လွယ်ကူစွာ ခွဲခြားသိရှိနိုင်ခြင်း။
Reservation (အခန်းကြိုတင်ခြင်း)များ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
Reservation လက်ခံထားသည့် အခန်းများကိုမှားယွင်း၍ Check In မဝင်မိစေရန် Room Assign (အခန်းလွတ်ရွေးချယ်ရာတွင်ယာယီဖယ်ထားပေးခြင်း)များ ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
Room Assign များ ပယ်ဖျက်နိုင်ခြင်း။
Check Out လုပ်ရာတွင် Room Charges သာမက Laundry Charges, F&B Charges အစရှိသည့် Extra Charges များကိုပါ တစ်ပါတည်းပေါင်း၍ Bill ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Customer များ အသုံးပြုထားသည့် ကုန်ကျငွေပမာဏကို Customer များမှ စိတ်တိုင်းကျခွဲခြား၍ ကြိုတင်ငွေရှင်းနိုင်ခြင်း (Bill ကြိုတင်ရှင်းထားနိုင်ခြင်း)
အဖွဲ့လိုက်တည်းခိုပါက Room Charges, Laundry Charges, F&B Charges များကို တစ်ယောက်ချင်းစီ၏ နာမည်အလိုက်ခွဲခြားရှင်းနိုင်ခြင်း။
Cash Down, Visa/Master နှင့် City လယ်ဂျာတို့ကို ရွေးချယ်၍ လွယ်ကူစွာ Bill ရှင်းပေးနိုင်ခြင်း။
မိမိဆိုင်၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆိုင်တွင်းသာမက စားသုံးသူ၏အိမ်အရောက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။
မိမိဆိုင်၏ဟင်းပွဲများ၊ထုတ်ကုန်များကို အသစ်ထည့်ခြင်း၊ဖယ်ရှားခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ။
စားသုံးသူ ဝယ်ယူသူများမှ လွယ်ကူရိုးရှင်းသောပုံစံဖြင့် order မှာယူနိုင်ခြင်း။
Order မှာယူရာတွင်လည်း စားသုံးသူဝယ်ယူသူများမှ ဟင်းပွဲများ၊ ထုတ်ကုန်များကို ပုံများဖြင့်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုမှာယူနိုင်ခြင်း။
စားသုံးသူ၊ဝယ်ယူသူများအတွက် ငွေပေးချေမှုစနစ် ပုံစံမျိုးစုံရှိခြင်း။
ဆိုင်ရှင်များအနေဖြင့်ကိုယ်ပိုင် Delivery လမ်း​ကြောင်းနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Customer များအနေဖြင့် မိမိမှာယူထားသောOrderများအား အသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်ခြင်း။
ရောင်းချထားသော အစားအသောက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၏ နေ့စဥ်/လစဥ် အရောင်းစာရင်းများအားပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
စာရင်းအင်း ထိန်းချုပ်စနစ် ဆော့ဝဲလ်
Quick Stock ဖြင့်ချိတ်ဆက်သုံးစွဲပါက အရောင်းစာရင်းများ Auto စာရင်းသွင်းနိုင်သဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း။
စားသောက်ဆိုင်များအနေဖြင့် နေ့စဥ်အပ်ငွေများအား ကျပ်/ USD/ Yuan/ Baht/ Credit Card & Visa Card စသည်ဖြင့်မှန်ကန်စွာအပ်နိုင်ခြင်း။
Trial Balance Report သည် အခြား software အများစုနှင့်မတူ တစ်နေ့/တစ်လ/တစ်နှစ် စသည်ဖြင့် မိမိနှစ်သက်ရာ ရက်စွဲများအလိုက်ကန့်သတ်ကြည့်ပါက Trial Balance, Comprehensive Income Statement and Statement of Financial Position များသည် ကိုက်ညီပါသည်။
Comprehensive income statement တွင် ပုံမှန် Report အပြင် မိမိနှစ်သက်သော လ ၂ လ အား နှိုင်းယှဥ်ကြည့်နိုင်ခြင်း။
Trial Balance, Comprehensive Income Statement and Statement of Financial Position Reports များသည် မိမိနှစ်သက်သည့် ရက်စွဲအလိုက် တစ်နေ့/ တစ်ပတ်/ တစ်လ/ တစ်နှစ်/ နှစ်နှစ် စသည်ဖြင့် မိမိနှစ်သက်သည့် Report အား ကြည့်နိုင်ပါသည်။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Department အလိုက် ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်း။
ဝန်ထမ်းများ၏ မတူညီသောအလုပ်ချိန်များကို သေချာစွာ အသေးစိတ် Work Assign လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။
ကုမ္ပဏီ၏ rules များအတိုင်း ရုံးတက်ခြင်း၊ ရုံးဆင်းခြင်း၊ နောက်ကျခြင်း၊ အချိန်ပို/ခွင့် စသည်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီ၏ လစာသတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ဌာန/ ရာထူးပေါ်မူတည်၍ အလွယ်တကူသတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Pay Slip များ၊ Documentation များကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ခြင်း။
Pay Slipများကို Customer များစိတ်ကြိုက် Customize ရေးဆွဲပေးခြင်း။
HR Department အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များ Report များကို နှစ်အလိုက် လအလိုက်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း။
Room 505, Building 1, Aung Myay TharSi Housing, Yangon-Insein Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
+95 9449251299 (viber)
Copyright © All rights reserved | This template is made by Blue Ocean IT Solution